April 1, 2019 - Pardeshi Khabar
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: April 1, 2019
काठमाडौं : ईपीएस अन्तर्गत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि यस वर्ष ९३ हजार ३७६ आवेदन परेको छ । कोरिया भाषा परीक्षा का लागि आवेदन दिने अन्तिम समयसीमा आइतबार राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको थियो । यही चैत्र ८ गतेदेखि ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो । ईपएिस खाशाकाअनुसार अन्तिम दिन आइतबार रातिसम्म आवेनद दिएका ९३ हजार ३७६ मध्ये उत्पादनतर्फ ६३ हजार ४६७ र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २८ हजार ८८९ आवेदन परेका छन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष करीब ११ भन्दा बढी आवेदन परेको छ । कोरियाले यसपाली १० हजारफुर्सदमा
सुवास गोतामे काठमाडौं : कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ९ महिना बित्यो । अनुसन्धान टोलीले ६० जनाभन्दा बढीको डीएनए परीक्षण गरिसक्यो । यसबीचमा प्रहरीले धेरै पटक भनि पनि सक्यो— अपराधीको नजिकै पुग्यौं । तर पीडितले न्याय नपाएको देख्दा लाग्छ, अनुसन्धान ज्यूँका त्यूँ छ । शून्यमा । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको विशेष टोली अनुसन्धानमै छन् । निर्मलाको भेजाइनल स्वाबसँग डीएनए परीक्षण गरिएका व्यक्तिसँग मेल खाएको छैन । साउन १० गते बेपत्ता निर्मलाको शव ११ गतेफुर्सदमा
श्रम सम्बन्धी गुनासो सुन्‍न कल सेन्टर, सिधै मन्त्रीको मोबाइमा पुग्‍नेछ सूचना
काठमाडौं : तपाईँ वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा हुनुहुन्छ ? वा विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? आफू जान लागेको काम वा कम्पनीबारे कुनै जिज्ञासा छ ? वा शुल्क कति लाग्ने भन्ने अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? वा तपाईँलाई हालै सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जुनसुकै जिज्ञासा छ ? श्रमसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो छन् ? अब तपाईँ सिधै सरकारलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको गुनासो सुन्न सरकारले सिंहदरबारमा कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछन् र द्रुत समाधानको उपाय सुझाउनेछन्। यदि द्रुत कारबाही भएन भने त्यसको जानकारीफुर्सदमा
चैत्र १८ , काठमाडौं। सरकारले बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु वा आन्तरीक श्रम बजारका गुनासा सुन्न कल सेण्टर सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमवार कल सेण्टरको उद्घाटन गरे । बैदेशिक रोजगार बोर्डद्धारा श्रम मन्त्रालयमा स्थापित सो कल सेण्टर सोमवार देखि विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म सञ्चालन सुरु भएको छ । कल सेण्टरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको नेपाली पनि समस्यामा परेमा सो सेण्टरमा जानकारी गराउन सक्ने र सरकारले मद्धत गर्ने बताए । उनले बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुसँगै आन्तरीक श्रम बजारका समस्या तथा सुझावहरुफुर्सदमा
अप्रिल १, २०१९-बारा। बारा –पर्सामा आइतबार आएको हावाहुरीमा मृत्यु हुनेहरुको नाम खुलेको छ। जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाराले घटनामा मृत्यु हुने २६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। मृतकहरुको शव नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्ज, नेसलन मेडिकल कजेज, कलैया अस्पताल लगायतमा राखिएको छ। तीनै सुरक्षा निकाय उद्दारमा खटिएका छन्। यस अघि नेपाली सेनाको स्काइ ट्रक मार्फत ६ जना घाइतेलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइएको छ। अन्य घाइतेहरुको बारा र पर्साका अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको छ।साभार: नागरिक न्युजबाट
नेपाली खबर, प्रमुख समाचार No Comments »